फुटबलमा पेनाल्टी हानेजस्तै सजिलै जितेँः चिरीबाबु महर्जन :: सबिना श्रेष्ठ :: Setopati
महर्जनले यसपालि त्यस्ता के काम गर्ने सोचेका छन् जुन उनले पछिल्ला पाँच वर्षमा गर्न सकेनन्?
ललितपुर, जेठ १०
ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन जिन्दगीमा बिरलै 'फेल' भए।
कक्षा १ देखि १० सम्म कक्षाको पढाइमा उनी सधैं प्रथम। स्नातकोत्तर (एमकम) सम्मको पढाइमा सधैं पास। राजनीतिमा आएपछि जुनै चुनाव जितेका छन्। तीन पटक त निर्वाचन लडेर वडाध्यक्ष भए। त्यसपछि ज्यापू समाजमा पनि निर्वाचित भएर अध्यक्ष भए।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा जितेर उनी ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर भए। यो पटक झन् विशिष्ट अंक ल्याएर उनी पुनः निर्वाचित भएका छन्।
मेयर महर्जनले ४२ हजार ७२२ मत पाएका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले २४ हजार ५६० मत पाए।
ललितपुरको मेयरमा पुनः निर्वाचित भएका महर्जन यो पटकको चुनावमा सुरूदेखि नै निकै ढुक्क देखिन्थे। निर्धक्क भएर उनी भन्थे, 'योपटक पनि जित्ने मैले नै हो।'
जित्नेमा उनी यति विश्वस्त थिए कि चुनावका लागि मनोनित भएपछि आफूले १५ हजार बढी मत ल्याएर जित्ने दाबी नै गरे। आकलन गरेभन्दा धेरै, १८ हजार १ सय ६२ मतान्तरसहित उनले व्यञ्जनकारलाई पराजित गरेका छन्।
अघिल्लो चुनावमा त कहाँ यति सजिलो थियो उनलाई?
सुरूमा आफ्नै पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई पत्याएका थिएनन्। देउवासँग उनले आफूले जित्छु भनेर बाजी नै राख्नुपरेको थियो। उनले चुनाव र बाजी मात्र जितेनन्, आफ्नो पार्टीको शिर पनि ठाडो पारेको उनी ठान्छन्।
राम्रो काम गरेको भनेर तारिफ पाएका मेयर महर्जनलाई यसपालि उम्मेदवार बनाउन हुँदैन भन्नेमा कांग्रेसभित्रै चर्को लबिङ थियो। सात आकांक्षीहरूको लर्कोबाट देउवाले उनलाई नै ललितपुरको मेयर उम्मेदवारमा छानेका हुन्।
त्यसरी छनोट भएका उनलाई मतगणनामा भने उत्ति रोचक लागेनछ। जितको अघिल्लो दिन बखुन्डोलस्थित निवासमा आराम गरेर बसेका उनले भनेका थिए, 'यो पटक चुनावमा खासै रौनक छैन। एक्लो खेलाडीजस्तो लागिरहेको छ। फुटबलमा पेनाल्टी सुट हानेजस्तै भयो। अहिले त औधी सजिलै जितेको छु।'
महर्जनले अघिल्लो चुनावको घटना पनि सम्झिँदै थपे, 'एकछिनसम्म २१०० मतान्तरले अग्रता लिइरहेको मान्छे पछि १०६ मा झर्दा मुटु नै सिरिंग भएको हिजोजस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको चुनाव पो डर र उत्सुकताले भरिएकाले रोचक थियो।'
त्यति बेला उनले एमालेका उम्मेदवार व्यञ्जनकारलाई जम्मा ३२६ मतले जितेका थिए। योपटक सजिलै जित्नुको कारण आफूले पछिल्लो कार्यकालमा गरेको राम्रा कामहरूको परिणाम उनी ठान्छन्। भन्छन्, 'जनताले त्यसको उचित मूल्यांकन गरेजस्तो मलाई लाग्छ।'
चुनावअगाडि हामीले ललितपुरका मेयर महर्जनको पाँचवर्षे रिपोर्ट कार्ड भन्ने स्टोरी गरेका थियौं। त्यो स्टोरीमा उनले पाँच वर्षको अन्तरालमा गरेका कामबारे जानकारी दिएका थियौं। आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित ९० प्रतिशत काम पूरा गरेको मेयर महर्जनको भनाइ छ। घोषणापत्रमा उल्लेख नभएका ट्रकलाइन प्रोजेक्ट, साइकल लेन लगायत विभिन्न काम पनि गरेको उनी दाबी गर्छन्।
उनले यो कार्यकालमा आफूले पछिल्लो कार्यकालमा सुरू गरेर पूरा गर्न नसकेका कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर गर्ने बताएका छन्।
पहिलो नम्बरमा पाटन दरबार क्षेत्रमा बर्खा बेला पानी जम्ने समस्या समाधान गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
भने, 'पाटन दरबार क्षेत्रमा बर्खाको पानी जम्ने समस्या छ। हिति (ढुंगेधारा) र सडकमा पानी जम्छ। यो समस्या समाधान गर्न महानगरले २.८ किलोमिटरको पाइपलाइन परियोजना सुरू गरेको छ। यसअन्तर्गत जमेको पानी सोसेर अन्तै पठाइन्छ।'
दातृ संस्था एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग मिलेर सुरू गरिएको उक्त काम ४० प्रतिशत मात्र पूरा भएकाले यो कार्यकालमा सक्काउने उनले बताए।
पाटन दरबार क्षेत्रमै रहेको छैठौं शताब्दीको मंगः हिति लगायत अन्य परम्परागत हितिहरूमा बाह्रै महिना पानी आउने गरी व्यवस्था मिलाउने उनको दोस्रो योजना छ। हाल जारी रहेको देगु तलेजु, नरसिङ, बालकुमारी, रातो मच्छिन्द्रनाथ लगायत मन्दिरहरूको जिर्णोद्धार पनि पूरा गर्ने उनले बताए।
महर्जनले अबको पाँच वर्षमा गर्ने सोच बनाएको तेस्रो योजना हो, पाटनको वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण।
लगनखेलको अशोक स्तुपसँगै जोडिएको ४५ रोपनी जग्गामा सप्तपाताल पोखरीलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँताएर त्यहाँ कमलको फूल फुलाउने उनले बताए।
'यसका लागि काम सुरू भइसकेको छ। अर्को तीन वर्षमा सप्तपाताल पोखरी पुनर्स्थापना गर्नेछु र त्यहाँ कमलको फूल फुलाउने छु,' उनले भने।
ललितपुर महानगरभित्र विद्युतीय गाडी व्यापक रूपमा चलाउने कामलाई जोड दिने उनले बताए। सार्वजनिक यातायातका लागि ललितपुरको आफ्नै गुरुयोजना छ। धेरै ठाउँमा महानगरले एकतर्फी बाटो बनाएको छ। इन्धनको समस्या हटाउन महानगरले साझासँग सहकार्य गरेर विद्युतीय बस चलाउन लागेको हो जुन भित्री सहरमा पनि चल्नेछ।
महानगरभित्र गुणस्तरीय शिक्षामा काम गर्नु उनको चौथो योजनामा पर्छ।
चालीस सामुदायिक विद्यालय रहेको ललितपुर महानगरमा दरबन्दी मिलानको काम सकिएको र यी विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गरी निजी विद्यालयको गुणस्तरको विषयमा पनि ध्यान दिने उनले बताए।
कोरोना महामारी बेला ललितपुर महानगरले राम्रो काम गरेकाले तारिफ पाएको भन्दै त्यसैलाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने आफ्नो पाँचौं योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
'७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई निमोनियाको खोप सुरू गरेका छौं। त्यसलाई आउँदो पाँच वर्षमा पूरा गर्ने योजना छ,' उनले भने, 'संघीय सरकारको नीतिअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि लागू गर्ने छौं।'
महानगरको बेरोजगारी समस्या हल गर्न विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै तालिम लिएकाहरूलाई व्यवसाय थाल्न सुरू पुँजीको व्यवस्थापन गर्नु उनको छैठौं योजना हो।
मेयर महर्जन आफ्नो सहरलाई 'स्मार्ट सिटी' बनाउन चाहन्छन्। तर सहर स्मार्ट बनाउने चक्करमा घर भत्काएर, बाटो ठूलो पारेर नहुनेमा उनी सजग छन्। भित्रको पुरानो सहरलाई पुरानै ढाँचामा संरक्षण गरेर बाहिरी भागमा सहरीकरण गर्ने उनको सोच छ।
यो कार्यकालमा उनले पहिलेभन्दा बढी काम गरेर देखाउने बताएका छन्।
'हामीले गएको पाँच वर्षमा तपाईंहरूले सम्झिने किसिमको काम गरेर देखायौं। त्यो अनुभवलाई साँचेर अझ बढी काम गरेर देखाउनेछौं,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १०, २०७९, २१:३७:००